Matoandahatsoratra - Instant Malagasy
Par Parfait Partout le 29 Mai 2020 à 07:47
Mba nahita aho ka letra, torovana, saingy bitika ka tsy henoin-teny. Sahin'iza loatra ? Ary fahendrena avy aiza no nentina namolaka ny hevi-dravina hamotehan-tantara ? Io ny satrok'iarivo fa voahosy, io ny diadema miseho ho mari-piandrianana. Mari-piandrianana merina hoy ny re rehefa mijery ny tantara saingy miofo ho mari-piandrianan'ny tantaram-pirenena ihany koa rehefa dila ela ny taonjato nisian'ireo mpanjaka tao an-drova.
Misy fanontaniana mivangongo sy miavosa ao an-doha. Te hitady fahamarinana, te hivazavaza fanavotana. Ketraka ny fanahy rehefa hanazava amin'ny taranaka ny tantara. Fa indrindra ny tsy mba fihainoana na dia ny amparahatoka monja ihany aza ny teny Masina avy amin'ny vavan'ny mpitahiry fahendrena fahagoga.
Raki-pahatsiarovana tsy hay ovaina ny omaly, jereo ny tantara.
Par Parfait Partout le 18 Mai 2020 à 10:52
Tsy mipetraka atao mba hilalana
tsy mitsidika atao mandrosoa
tsy mitatao be tahaka ny lanitra na mitsilany be toy ny tany
fa toy ny vovoka enti-drivotra ka kely ihany dia mahaditsoka,
ary toy ny oram-panala ka mby an-koditra vao mahangoly.
toy izany ny aretina fa indrindra ity aretina mampitanondrika izao tontolo izao ity.
Mananjara isika Malagasy ilay mipetraka amin'ny tany misary tongotra an-kavia, mitoetra amin'ny tany nofinari-bavan'Ombalahibemaso hoe "Ny Ranomasina no valamparihiko"
Mananjara isika fa hoy ny fiteny :
sambatra ny ambiaty fa nataon'Andriamanitra famataran-taona;
sambatra kosa ny Malagasy fa manana fanefitra amin'ny areti-mandoza.
Raokandro : izay voaraoky ny tànana no Masina ka mandroaka ny andro ratsy. Dia indro fa manana raokandro isika izay hoy aho hoe : ny mpitazana an'Antsahadinta dia miara-miaina aminy ny zavozavo-maraina fa ny patrak'ala dia azy irery ihany.
Samy tena andriamanitra ho feno fahasalamana.
Par Parfait Partout le 12 Juin 2014 à 09:15
Ny Mena : lokon’ny tanimena fanao lalotr’irony rindrin’ela fahizany teto Imerina.
Mena toy irony lambamena famonosana ny razan’ireo Andriana niamboho
Mena koa anefa, toy ny ran’ombalahy reharehan’I Gasikara!
Ny Fotsy : fotsy toy ny vary foto-piveloman’ny Malagasy an’alin-kisa
Ary fotsy toy ny lamba fisalotr’ireo andriambavilanitra teto Madagasikara fahizay.
Ny Maitso: Lokon’ilay ravinala (arbre des voyageurs), ravinala izay hazo famantaran’ilay Gasikara maneran-tany, ary nohajaina manokana fa noheverina ho endriky fiaraha-miaina eo amin’ny zanak’olombelona sy ny natiora. Maitso toy irony tanimbary maitso mavana mitomandavana.
Asandrato fa Masina I Gasikara
Par Parfait Partout le 3 Avril 2014 à 15:42
Hanoratra eto amin'ny Instant Malagasy
Par Parfait Partout le 5 Février 2014 à 15:20
Ry mpankafy ny kanto malagasy !
Tanjona tokana no kinendrin’ny Instant Malagasy, dia ny hanandratra avo ny hasin’ny kolontsaina Malagasy, na Malagasy avy aiza, na monina aiza, na inona foko, na inona finoana… dia heverina fa tokana ny Malagasy fa ny fomban-tany sy seha-pibeazana teo amin’ny kolontsaina no samihafa.
Noho izany, sy noho ny faniriana hatrany hampivelatra ny kolontsaina dia manasa anao aho handray anjara amin’ny fanoratana ato amin’ny Instant Malagasy.
Mahay mikabary ianao?
Mpandala ny fomba Malagasy?
Manana fomba mampiavaka azy ny toerana niavianao?
Sa manana sary mety mampiavaka sy mampisongadina ny maha-malagasy ianao?
Misy toro-hevitra, na toro-lalana, na fanitsiana tianao hatao hanatsarana ny Instant Malagasy?
Na avy aiza na avy aiza: na eto Madagasikara na eto an-dafin’ny riaka,
Manasa anao aho, handray anjara amin’ny fametrahana ny sangan’asanao eto amin’ny Instant Malagasy.
Mitoetra ho fananao manokana ny asa soratrao ary ny Instant Malagasy dia tsy hampiasa izany ho an’ny tombotsoany manokana.
Hampivelatra sy hanome habaka midadasika kokoa ho an’ny kolontsaina Malagasy isika.
Raha te-handray anjara ianao
Miresaha mivantana amiko ao amin’ny facebook amin’ity rohy ity
Na ihany koa alefaso amin’ity rohy ity ny asa soratrao na fanontanianao
Mankasitraka anao ary mitomboa hasina hatrany isika rehetra!
Instant Malagasy - Blog hébergé sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -